Runtastic Moment, famantaranandro kanto ho an'ny atleta | Vaovao IPhone
Raha miresaka isika fehin-tànana amin'ny hetsikaAzo antoka fa maro aminareo no nahatsapa fa amin'ny hatsarana, ny maro an'isa dia mamela zavatra maro irina. Tsara ho an'ny fanatanjahan-tena izy ireo fa isan'andro isan'andro, tsy mifanaraka amin'ny toe-javatra maro izy ireo noho ny lokony marevaka, ny bateria ambany ary ny endriny mampiahiahy.
Hamahana ity olana ity, Fotoana tsy ampoizina, famataran-drano mahatohitra rano misy vitamina (milentika hatramin'ny 100 metatra) izay handraikitra ny hetsika ataontsika isan'andro, miaraka amin'ny endrika tsara indrindra ary miaraka amin'ny fizakan-tena hatramin'ny 6 volana.
Amin'ny ankapobeny dia misy 4 fanangonana Runtastic Moment tsy mitovy miankina amin'ny tsirontsika:
Miaraka amina tranga vita amin'ny aliminioma, vera mahazaka fikorisana ary a fehy silikona ahazoana aina, ny Moment Fun dia natao ho an'ireo mavitrika sy tia milalao rehetra. Hita amin'ny loko efatra izy io - voaroy, plum, fasika ary indigo ary 129,99 euro ny vidiny.
Mitovy amin'ny Moment Fun, ny Moment Basic manana endrika lehibe kokoa ary hita ao amin'ny beige sy mainty ho an'ny 129,99 euro.
Miaraka amina endrika fomba madio sy tsotra, Moment Classic dia manana fantsom-by tsy misy fangarony, vera mahatohitra fikorisana, ary fehy vita amin'ny hoditra, misy amin'ny volafotsy, volamena ary volamena rose amin'ny vidiny 199,99.
Natao ho an'ny fijery be pitsiny kokoa, ny Moment Elite dia manolotra fonosana vy tsy misy fangarony, vera mahatohitra fikorisana ary a fehin-koditra mainty sy lamba avo lenta amin'ny 199,99 euro.
Araka ny hitanao, ny endrik'i Runtastic Moment tsy mitovy dia tsy manambara mihitsy fa mijery famantaranandro manoratra ny asantsika izahay. Ilay kely fotsiny faritra ambany manome antsika famantarana momba izany izy ary ao anatin'izany dia ho hitantsika ny fandrosoana isan'andro amin'ny tanjona napetrakay (dingana, kaloria, minitra miasa).
Rehefa tonga ny fotoana fatoriana dia tsy maintsy tsindrio ny bokotra tokana misy ny bokotra hampiasana ny fomba fatoriana. Amin'izao fotoana izao dia hihorohoro vetivety ny famantaranandro ary ny fanjaitra amin'ny dial kely dia hifindra amin'ny toeran'ny volana ary hanomboka ny famantaranandro. famakafakana ny torimaso. Rehefa mifoha isika dia tsindrio indray ny bokotra ary vonona ny hanomboka andro vaovao isika.
Mazava ho azy fa Fifandraisana Bluetooth hanolotra fametrahana fotoana mandeha ho azy sy hijerena ireo data voarakitra ao amin'ny fiambenana amin'ny antsipiriany bebe kokoa, misaotra ny Runtastic Me fampiharana izay navoaka ho an'ny fehin-tànana Orbit ary navaozina ankehitriny mba hifanaraka amin'ny Moment.
Runtastic Moment no eto azo manomboka anio ary azonao jerena ao amin'ny tranokalan'ny orinasa. Tsy ho ela dia hahatratra ireo mpivarotra nahazo lalana ihany koa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Runtastic Moment, famantaranandro mahafinaritra ho an'ireo izay te-hanara-maso ny asany
Tena matotra ve? dia hoy izy:
Mandehana famantaranandro «cuckoo», ataterin'izy ireo ihany koa ao anatin'ny 6 herinandro, hovidiko ilay Gear S2 vaovao, izay milay.
Mamaly amin'ny Serieux?
U dia hoy izy:
Azo antoka, satria naka tahaka ny satroboninahitry ny Apple Watch «mallet mahafinaritra izy ireo. Samsung nono.
Mamaly an'i U
Waze dia nitory noho ny halatra angon-drakitra tao amin'ny sari-tanin'izy ireo